Nd သည်သံလိုက်, ကြွေသံလိုက်, Alnico သံလိုက် - အထွေထွေသံလိုက်
Epoxy Nd သည်သံ Boron
နီကယ် (98) NdFeB ချထားတဲ့
သံလိုက်စညျးဝေးပှဲ = ဖလားသံလိုက်
သမဝါယမ client ကို
Ningbo Hehai လျှပ်စစ် Co. , Ltd မှ (အထွေထွေသံလိုက်) သံလိုက်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည်။
သံလိုက်ကျယ်ပြန့်စသည်တို့ကိုအာရုံခံကိရိယာများ, မော်တော်ကားမော်တာ, လျှပ်စစ်မော်တော်ယာဉ်များ, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အသုံးပြုကြသည်
ကျွန်ုပ်တို့၏အားသာချက်များကိုထုတ်လုပ်ခက်ခဲထုံးစံသံလိုက်၌ရှိကြ၏။ high quality နဲ့တင်းကျပ်စွာသည်းခံစိတ်သံလိုက်။
EPOXY Nd သည်သံလိုက်
NdFeB အစိတ်အပိုင်း = သံလိုက် Chuck
ချစ်ခင်ရပါသောသူငယ်ချင်းများတရုတ် Jan.20, 2020 ကနေ Feb.01, 2020, အများဆုံးရိုးရာတရုတ် Lunar New Year ပိတ်ရက်များမှ CNY အားလပ်ရက်၌ဖြစ်လိမ့်မည်! Feb.03, 2020 ရက်တွင်အလုပ်ကိုယ်ရေးမှတ်တမ်း, ဒါကြောင့်သင် CNY ရှေ့၌သင်တို့အလို့ငှာပေးပို့လိုလျှင်, အမိန့်အနည်းဆုံး Dec.10 မတိုင်မီထားရှိရလိမ့်မည် 2019. ပုံမှန်အားဖြင့်ဒီဇင်ဘာလဏလများမှာ ...
သံလိုက်ပစ္စည်းများစျေး - ဂလိုဘယ် Indust ...
သံလိုက်ပစ္စည်းများသဘာဝကျကျသံလိုက်ဂုဏ်သတ္တိများအပိုင်သို့မဟုတ်ဂုဏျသတ်တိမြားနိုင်တ္ထုဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် End-အသုံးပြုမှုအပေါ် အခြေခံ. ဤပစ္စည်းများအမြဲတမ်းသို့မဟုတ်ယာယီအဖြစ်ခွဲခြားနိုင်ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သောနူးညံ့ခက်ခဲများနှင့် Semi-ခက်ခဲအဖြစ်သံလိုက်ပစ္စည်းများအမျိုးမျိုးသံလိုက် mater အတွက်အသုံးပြုကြသည် ...
© Copyright - 2010-2020: အားလုံးအခွင့်အရေး။
Gaoqiao စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးဧရိယာ, Yinzhou ခရိုင်, Ningbo, တရုတ် 315174
ပတေရုသ (@) gmcmagnet.com
Featured ထုတ်ကုန်များ , မြေပုံအညွှန်း , မိုဘိုင်းဆိုက်ကို , FAQs
Alnico Ring Magnet, Custom Magnet, Bar Magnet, အမြင့်အပူချိန်သံလိုက် , Nd သည်သံလိုက်, Alnico Pot သံလိုက် ,